3 xiisaha xiisaha duufaanka | Saadaasha Shabakadda
ka duufaannada Iyagu waa riwaayad la yaab leh, laakiin wax kasta oo iyaga ku saabsan miyaad ka ogtahay? Runtu waxay tahay inay weli jiraan waxyaabo badan oo naga yaabin kara, in yarna wax badan ayey ku leeyihiin dhacdooyinkan saadaasha hawada ee iftiiminaya cirka, xitaa xagaaga.
Marka xigta mid baan kuu sheegayaa 3 xiisaha xiisaha leh taasi, laga yaabee, inay kaa dhigeyso inaad ku aragtid iyaga indho kala duwan.
1 Hillaac ayaa duqeyn kara diyaaradaha
2 Haddii duufaan kugu dhacdo, ma sameyn kartid waxyaabo cayiman
3 Xilliga xagaaga waxaa jira duufaanno
Hillaac ayaa duqeyn kara diyaaradaha
Haa, runtii: way dhici karaan, laakiin waxba ma dhici doonaan. Qaybta dibedda ee diyaaradda, oo ah kan jidhka daboosha, waxay ka samaysan tahay aluminium, oo ah bir u qabta koronto qaab ay mar walba banaanka uga dhigeyso, kana celineysa inay gudaha gasho. Haa, waa in lagu hayaa xaalad kaamil ah, gudaha iyo dibaddaba, maadaama haddii kale dhibaato ka dhalan karto, sidii ku dhacday diyaaraddii PanAm 1963.
Haddii duufaan kugu dhacdo, ma sameyn kartid waxyaabo cayiman
Imisa jeer ayaad maqashay inaadan si toos ah gacanta ugu taaban karin godadka godka, oo xitaa kayar haddii ay qoyan tahay? Tani waxay leedahay sababta ay u tahay, taasina waa in biyuhu ay yihiin hagayaasha korantada ee ugu fiican, taas oo mar haddii ay taabato gacmaheena, wax ficil ah u qaadan mayso inay gaadho wadnaha oo noo keento, ugu yaraan, cabsi aad u weyn. Isla waxbaa ku dhaca duufaannada: Ma isticmaali kartid qalab koronto, iyo taleefanka gacanta, kumana hadli kartid khadka taleefanka.
Xilliga xagaaga waxaa jira duufaanno
Waa wax lagu qoslo, saw maaha? Laakiin haa, haa. Xilliga xagaaga waxaa jira duufaanno. Sababta Hagaag, tani waa sababta oo ah hawadu waa kuleyl sababtoo ah heerkulka sare sidaas darteedna way fududaanaysaa sidaa darteed si dhakhso leh ayuu u kacayaa wuuna ballaaranayaa. Sidaa darteed, waxay la xiriirtaa tiro hawo qabow, taasoo keeneysa dhibcahaan inay isku soo ururaan. Thanks to this ka duwan qabow iyo kulaylka, duufaanadu waxay ka soo bilowdaan kuwaas oo, inkasta oo ay badanaa socdaan wakhti gaaban, aad u kacsan yihiin.
Ma ka ogtahay waxyaalahan ku saabsan duufaanka?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 3 xiisaha xiisaha leh
'' Dhimashada xilliga qaboobaha '' waxay ku baraarujineysaa bulshada cilmiga leh